“Saddexdayada Musharrax Mid-baanu Nahay, Kii Soo Baxaaba Waa Kii Kale..” Musharraxiinta Somaliland | Dhamays Media Group
“Saddexdayada Musharrax Mid-baanu Nahay, Kii Soo Baxaaba Waa Kii Kale..” Musharraxiinta Somaliland
Hargeysa (Dhamays) – Musharraxiinta Saddexda Xisbiyada Qaranka Somaliland iyo Guddiga Doorashooyinka, ayaa si wada-jir ah Farriin ugu diray Guud ahaan Shacabka, waxayna ugu baaqeen inay u Midoobaan ilaalinta Amniga Qaranka, Maalinta Doorashadana si Wanaagsan uga qayb-qaataan.
Musharraxiinta Madaxweyne-nimo ee Xisbiyada KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa kulan Albaabadu u xidhnaayeen oo ay la yeesheen Guddiga Doorashada ka dib, waxay iyaga iyo Guddiga Doorashooyinka Qaranku si wada-jir ah Shacabka ugu soo jeediyeen inay Nabadgalyada ilaaliyaan isla-markaana ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato ku keeni kara Habsami u socodka Doorashada Madaxtooyada oo Haddii Alle yidhaahdo dhacaysa Isniinta.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Somaliland Eng. Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ugu horreyn Shirkaa Jaraa’id ka hadlay ayaa yidhi “Annaga oo Gacmaha is-haysana waxaanu farriin u diraynaa Dhammaan Muwaadiniinta Reer Somaliland ee Kaadhadhka haysta ee Doorashada Codaynaya, annaga oo ujeeddadayadu tahay idiinku Mid ah Codeeya.”
Afhayeenka Guddiga Doorashooyinka Siciid Cali Muuse ayaa isaguna si gaar ha uga hadlay Sababta loo hakinayo Baraha Internet-ka ee Bulshadu ku wada xidhiidho (Social Media), kuwaasi oo uu sheegay in Sababta ay u codsadeen in la hakiyo inay tahay in laga hor-tago dhibaato ay u horseedaan Dadka iyo Dalka, maaddaama oo Dadka Isticmaala qaarkood oo aan xil-kas ahayn ay Warar been ah ku faafin karaan.
Waxa kale oo uu Afhayeenku Cod-bixiyeyaasha ku War-geliyey in Maalinta Cod-bixinta in aanay soo xidhanin wax Calaamad ah oo muujinaya Xisbi “Waxaanu Cod-bixiyeyaasha u sheegaynaa in Maalinta Doorashada ee ay Codaynayaan in aanay soo xidhanin Calaamadaha Saddexda Xisbi, Koofiyad ha ahaato ama Shaadh ha ahaado, lama ogola in la soo xidho, Dadka Codaynayana waanu uga digaynaa.”ayuu yidhi.
Dhinaca kale, Musharraxiinta ayaa Taageerayaashooda ku adkeeyay in Maalinta Doorashada ay ilaalinta Nabadgalyada ka qayb-qaataan “Maantana waa Gar-naqsi labaad, ee Muwaadin ama Cod-bixiye ha u qaadanin Codka aad ridaysaa inuu ku eg-yahay Qofka aad dooranayso, Waayo? Qaranka ayaad hirgelinaysa, Ictiraafkii-baad raadinaysaa, Horumarkiisa ayaa Hirgelinaysaa, taasina waxay kaaga baahan tahay inaad si Masuuliyad ah uga qayb-gasho Doorashada Maalinta Cod-bixinta, oo Dedaal leh, oo Dul-qaad leh, oo Xaq-dhowrid leh. Marka Safafka la gelayo Saddexda Xisbi waa isku mid oo Hawl-qaran baa la hayaa oo Nin walba Cod ayuu dhiibanayaa, Ninka wax khariba ama qul-qulateeyaa Qaranka ayuu la dagaalamayaa oo cadowga ayuu la mid yahay, taana waa inuu ogaadaa Muwaadinku.”ayuu yidhi, Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, waxaanu intaa ku daray “Dad aan Somaliland-ba u calool fayoobayn, imikana aan u calool banaanayn ayaa nagu waaniya Dalka ha rogina. Waar Annaga taa la nooga wer-weri maayo, Da’ahaan la nooga wer-weri maayo, Waayo-aragnimo ahaan looga wer-weri maayo, tartanka uma galayno inaanu Dalka waxyeelayno ee waxaanu galaynaa inaanu horumarino, Tubta loo marayo ayaa lagu kala duwan yahay (Horumarinta dalka), taas ayaa lagu doodayaa, markaa Col na nihin ee Rag Saaxiibbo ah ayaanu nahay, Dad in badan soo wada-shaqeeyay ayaanu nahay. 15-kii Sannadood ee Xisbiyadu jireenba waanu wada taagnayn, Labadooduba UCID bay ahaayeen, labadii Doorasho ee ay dhaceen waa Raggii dul-qaatay ee yidhi waa Xaq ee Qaranka dhisay, markaa Saddexdayada kii soo baxaaba waa kii kale, oo Annagu mid-baanu nahay, maxaa loo baqayaa, yaa innagu dhex jira.”?
Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo isaguna halkaa ka hadlay ayaa yidhi “ILAAHAY wuu qoray Qofka soo baxaya, haddaad is-dhaqaajisid, haddaad Ceeb samayso iyo haddaad dedaashid waxba kama beddeli kartid Go’aanka ILAAHAY (Muwaadinkoow), waxba ha is-xiijina, caadifadda Reeraha iska daaya, waa inaad inoo ilaalisaan asluubta iyo Magaca iyo Sumcadda Dalkeena.”
Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa isaguna sheegay “Go’aanka Shacabkaa leh, Cidda aad doorataan baa Dalkan Madaxweyne ka noqonaysa, Xisbiga uu doono ha noqdee.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu amaanay Guddiga Doorashada “Komiishanku wuu ku guuleystay Tallaabooyinkii ka horreeyay Doorashada.”
Intaasi ka sakow, Musharraxiinta Xisbiyada oo mid mid loo waydiiyey inay Aqbalayaan Natiijada ka soo baxda Doorashada, ayaa dhammaantood ballan-qaaday inay aqbalayaan.
Previous: “Innaga Oo Safka Ku Wada Jirna, Waa Inaynu Gacan Bir Ah Ku Qabano Wixii Doorashada Waxyeelaya” Sheekh Aadan-Siiro
Next: “Somaliland Nin Gacan U Qaaday Kama Tagin Isagoon Adhaxda Ka Jabin..” Muuse Biixi